Farmaajo oo codsi u diray Musharixiinta Mucaaradka | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo oo codsi u diray Musharixiinta Mucaaradka
Dalabkan ayuu u mariyay Qoor-Qoor iyo Guudlaawe oo Villa Somalia uga wakiil ah dhex-dhexaadinta Musharixiinta Hawiye.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hadda doonaya inuu ku dhaqaaqo arin uu mudo 6 bilood ah ka diidanaa Musharixiinta Mucaaradka.
Sida Keydmedia Online wararka ku helayso, Farmaajo ayaa Qoor-Qoor iyo Guudlaawe u diray Musharixiinta oo saacadaha oo socda la filayo inay kulan guud iyo mid gaar ah la qaataan, iyagoo sameynaya dhexdhexaadin.
Farmaajo ayaa doonaya inuu la kulmo Musharixiinta Mucaaradka kadib markii muddo-kordhinta loo sameeyay, iyadoo ay muuqato in tallaabadan ay tahay mid uu ku doonayo inuu isaga dejiyo culeyska kasoo wajahay Beesha Caalamka.
Horey ayuu muddo lix bilood ah ka diidayay Farmaajo in Musharixiinta qeyb ka noqdaan wadahadallada arrimaha doorashooyinka, kuwaasoo fashil kusoo dhamaaday dhawaan, waxaana hadda lagu cadaadinayaa Farmaajo inuu dib ugu laabto Miiska wadahadalka.
Lama oga inay Musharixiinta aqbali doonaan iyo inkale dalabka Farmaajo uga yimid, iyagoo horey u shaaciyay mowqifkooda inay kasoo horjeedaan muddo-kordhinta sharci darrada ee uu sameeyay 12-kii bishan Gollaha Shacabka.
Maanta Farmaajo wuxuu la kulmay Beesha Caalamka, iyadoo lagu qasabayo inuu ka laabto muddo-kordhinta labada sano, islamarkaana uu ugu yaraan 4 bilood oo farsamo ku darsado inta doorashadda laga qabanayo, waxaana lagu amray inuu awoodda ku wareejiyo Rooble.